तिथि मेरो पत्रु » एक व्यावसायिक अनलाइन Dater बन्ने होसियार हुनुहोस्
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जुलाई. 04 2020 |3मिनेट पढ्न
हरेक वर्ष, मान्छे हजारौं आफ्नो 'सिद्ध म्याच मिलन’ अनलाइन डेटिङ सेवा मार्फत. अनि हजारौं हरेक वर्ष सयौं तिनीहरूको अनुभवबाट निराश. अनलाइन डेटिङ समस्या भएकाहरूले गर्न योगदान कारक को 'व्यावसायिक अनलाइन dater' को उद्भव छ, अनलाइन डेटिङ पत्रिका द्वारा गढा एक शब्द कसैले पा गम्भीर कार्य गर्ने व्यक्ति वर्णन गर्न, तर पनि गम्भीरतापूर्वक 'कुनै पनि मिति वा सम्बन्ध लिने मनसाय बिना’ अर्को खेलमा किनभने 'राम्रो हुन सक्छ।’
एक व्यावसायिक अनलाइन dater सामान्यतया निम्न बानी तीन या अधिक नजिकै:
> एकै समयमा भन्दा बढी छ मान्छे संग कुराकानी.
> एकै समयमा तीन या अधिक अनलाइन डेटिङ सेवाहरूको सदस्य.
> भित्र प्रोफाइल Relists 24 एक सम्बन्ध टुक्रिन को घण्टा.
> धेरै संचार बस 'अन्त Lets’ नयाँ संचार मा समय राख्न आदेश मा.
> सन्देशहरू र डेटिङ सेवाहरू धेरै पल्ट एक दिन Checks.
> सधैं अर्को खेलमा 'राम्रो हुन सक्छ' भन्ने विश्वास.
> कैयौँ पटक एक वर्ष भन्दा बढी मिति हुनेछ, विभिन्न मान्छे संग, एक हप्ता मा सेट.
> एक संभावित सम्बन्ध मा समस्या को पहिलो संकेत मा, कुरा अनलाइन डेटिङ फर्कन बन्द तोड्न lets.
> प्रोफाइल लुकाउन सक्छ, तर यो मेटाउन छैन, जब निरन्तर एक व्यक्ति डेटिङ.
> एक मिति देखि फर्काउँदा, तुरुन्तै अरूलाई देखि नयाँ सन्देश लागि मेल गर्ला.
आम, एक व्यक्ति जानिजानि म एक व्यावसायिक अनलाइन dater बन्न चाहन्छु 'भन्न गर्दैन’ त्यसपछि एक जीवन लक्ष्य रूपमा पछि लाग्न. यो व्यक्तिको अनलाइन डेटिङ अनुभव फलस्वरूप विकसित कुरा हो. त्यो / त्यो कसरी 'सजिलो देख्नुहुन्छ’ यो एक नयाँ मिति प्राप्त छ र लगभग दैनिक नयाँ अनुहार गर्न शुरू को छ. व्यक्ति को यो थाह अघि, त्यो / त्यो आधा दर्जन संग कुराकानी (वा बढी) एकै समयमा मान्छे. एक मिति एक व्यक्ति संग व्यवस्था मिलाएको छ जब त्यो / त्यो मिति देखि फर्कंदा व्यक्तिको इनबक्समा प्रतीक्षा छ संभावनाहरु अझै पनि छन्. यो, बारी मा, अर्को व्यक्ति 'राम्रो हुन सक्छ कि एक अवचेतन मानसिकता विकास गर्न सुरु,’ त्यसैले यो ती समस्या माध्यम समस्या को पहिलो संकेत मा एक सम्बन्ध वा डेटिङ अनुभव छोड्न भन्दा काम गर्न सजिलो छ.
एक विशेष डेटिङ सम्बन्ध मा प्रवेश गर्दा एक व्यावसायिक अनलाइन dater सामान्यतया यो मेटाउने बनाम एक प्रोफाइल लुकाउन हुनेछ. Subconsciously, व्यक्ति साँच्चै दिने छैन उनको 100% सम्बन्ध तिनीहरू मिति को ग्रह फिर्ता सजिलो भाग्ने बाटो तर्जुमा छन् किनभने.
व्यावसायिक अनलाइन daters, यसलाई साकार बिना, मानिसहरूले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हो तिनीहरूले सम्पर्क संग आफ्नो अभियान समयमा आउन. उदाहरणका लागि, एक व्यावसायिक अनलाइन dater नै समय मा सात मान्छे लेखन हुन सक्छ, जब अर्को नयाँ रोचक आशा माथि देखाउँछ. फलस्वरूप, व्यावसायिक अनलाइन dater एक कुराकानीमा अनुमति दिन्छ (वा बढी) अन्य सात मान्छे को अचानक रोक्न, जवाफ बिना व्यक्ति छोडने र सोच, उहाँले गरे जहाँ '/ त्यो गर्न गायब?’ व्यावसायिक अनलाइन daters अनलाइन डेटिङ गर्न ल्याउन अन्य समस्या साँचो प्रतिबद्धता कमी छ. तिनीहरूले तीन हुन सक्छ, चार वा अझ सम्बन्ध एक वर्ष. सम्बन्धहरू सामान्यतया अल्पकालीन र व्यावसायिक अनलाइन dater एक नयाँ मिति लाइन छ हो (उहाँले नयाँ कसैसित / त्यो अनलाइन भेट) एक टुक्रिन को धेरै दिन भित्र.
चाहँदैनन् होला एक व्यावसायिक अनलाइन dater को तीन या अधिक झुकाउ नजिकै व्यक्तिले त्यो / त्यो एक व्यावसायिक अनलाइन dater छ कि स्वीकार गर्न, तर यसो समस्या को समाधान गर्न पहिलो कदम हो. समस्या को समाधान गर्न अन्य कदम हो:
> पूर्ण आफ्नो प्रोफाइल मेटाउन(को) एक सम्बन्धमा प्रवेश गर्दा. कुनै फिर्ता देख छैन, केवल अगाडी.
> समस्या माध्यम ले काम गर्न बलियो संकल्प संग आफ्नो सम्बन्ध आफैलाई प्रतिबद्धता. एक सम्बन्धमा विषयहरूमा माध्यम ले काम मान्छे बढ्न मदत के छ. भाग्नु समाधान होइन.
> के तपाईं कसैसित सञ्चार रोक्न भने, यो चिसो टर्की गर्दैनौं. त्यो / त्यो किन थाह छ भनेर त कम से कम त्यस व्यक्तिले विनम्र नोट पठाउन. व्यक्ति तपाईं यस को लागि अधिक आदर गर्नेछन्.
> तपाईं जस्तै र यो संग छडी एक अनलाइन डेटिङ सेवा खोज्नुहोस्. यो तपाईं संग कुराकानी गर्न सक्छन् कति नयाँ मान्छे देख्न एक खेल होइन. तपाईं कुराकानी हरेक व्यक्ति वास्तविक भावनाहरू एक वास्तविक व्यक्ति हो. तिनीहरूलाई नेतृत्व नगर्नुहोस्.
> केवल एक समय मा मान्छे को एक सानो संख्या कुराकानी.
> को मानसिकता मा गिरावट छैन 'अर्को एक राम्रो हुन सक्छ।’ बरु, तपाईं संग हो व्यक्ति ध्यान र तिनीहरूले छन् भनेर थाह 'सबै भन्दा राम्रो'. त्यसपछि यो काम गर्न.
व्यावसायिक अनलाइन daters थाहै नपाई आफ्नो 'साहसिक' को समयमा धेरै मानिसहरूलाई हानि. तर सायद के झन् खराब छ तिनीहरूले दीर्घकालीन सम्बन्ध सफलता को उत्पादन सम्बन्ध विषयहरूमा माध्यम ले काम गर्न सिक्न कहिल्यै व्यावसायिक अनलाइन daters आफूलाई चोट छ. सौभाग्य, संकल्प संग, व्यावसायिक अनलाइन daters परिवर्तन गर्न सक्छन् तिनीहरूले सम्बन्ध मा नै तीव्र ध्यान हुँदा (तिनीहरूले अनलाइन डेटिङ गरे जस्तै) त्यसपछि सम्बन्ध सामान्यतया एउटा अचम्मको र दिगो अनुभव परिणत हुन्छ. अनि त्यो अनलाइन भेट दुई व्यक्तिले अर्को सफलता को कहानी उत्पादन.
एक अद्भुत पहिलो तिथि छ कसरी